Abaphathi Bangakusebenzisa Kanjani Ukuhlaziya Idatha Ukuthuthukisa Ukusebenza | Martech Zone
Abaphathi Bangakusebenzisa Kanjani Ukuhlaziya Idatha Ukuthuthukisa Ukusebenza
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 25, i-2020 NgoMsombuluko, Februwari 24, 2020 UChristopher Parsons
Izindleko eziwayo nokukhula okuyinkimbinkimbi kwezindlela zokuhlaziywa kwedatha kuvumele ngisho nokuqalisa okusha futhi amabhizinisi amancane ukujabulela izinzuzo zokuqonda okuphezulu nokuqonda okuthuthukisiwe. I-data analytics iyithuluzi elinamandla elinamandla okuthuthukisa ukusebenza kahle, ukuthuthukisa ubudlelwane bamakhasimende nokuqinisekisa ukuthi amabhizinisi ayakwazi ukubona nokuxazulula izingqinamba ezingaba khona kalula. Ukufunda okwengeziwe ngamathuluzi wakamuva nezindlela zokuhlaziya kuqinisekisa ukuthi izinsizakusebenza nezixazululo zakamuva mancane amathuba okuthi zinganakwa.
Ukuhlola nokwenza ngcono izinqubo zokusebenza
Izindlela ezisebenza kangcono zokuhlola nokukala izici ezibalulekile zokusebenza nokuhamba komsebenzi kungavumela izinhlangano ukuthi zithuthukise ngokuphawulekayo ukusebenza kahle nokusebenza. Isoftware yokuhlaziya idatha, izinsizakalo nezixazululo zinganikeza ukuqonda okuthuthukisiwe nokuqonda okukhulu mayelana nazo zonke izici zokusebenza kwansuku zonke.
Ukukwazi ukusetha nokusungula izilinganiso ezisebenza ngempumelelo kakhulu noma ukuhlola nokuqhathanisa izinguquko ezingaba khona ngaphambi kokuqaliswa kungadala amathuba amaningi okwenza ngcono nokucwengwa. Kusukela ekuhlolweni okuphezulu kuya kumibiko yesikhathi sangempela, ama-analytics angadlala indima enkulu ekuqinisekiseni ukuthi ukusebenza kahle kukwazi ukuthuthukiswa.
Kuthuthukisa Ubudlelwano Bamakhasimende
Ukuhlakulela isisekelo esikhulu samakhasimende noma ukukwazi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende akhona nawesikhathi esizayo yizinkinga okungekho bhizinisi elingakwazi ukuzitholela isaphulelo. Bangu izindlela eziningi ukuthi ukuhlaziywa kwedatha kungasetshenziswa ukwenza ngcono ubudlelwane bamakhasimende futhi kukhulise ukwaneliseka kwamakhasimende. Kusukela ekudaleni amaphrofayli anemininingwane kungenzeka kusetshenziselwe ukulindela kangcono izidingo zezinhlobo ezahlukahlukene zamakhasimende ukuze zikwazi ukuhlaziya imininingwane ye-akhawunti yamakhasimende ukuze kunqunywe amaphethini ayisisekelo wokuziphatha, izibalo zedatha zingaba nokuningi ongakunikeza. Ukuthola ukuqonda okungcono kwamakhasimende abo kuqinisekisa ukuthi amabhizinisi azokwazi kangcono ukuhlakulela nokugcina ubudlelwano obuhle obungaholela empumelelweni enkulu yesikhathi eside.
Ukukhomba Amathuba Wokwenza Ngcono
Ukuntuleka kokuqonda kuvame ukwenza kube nzima ukuthola izingqinamba nezimo ezingaba nomthelela ekusebenzeni jikelele. Izibalo zedatha zenza kube lula ukubheka izici ezahlukahlukene zokusebenza noma ukuhlola ukusebenza kahle namazinga wokusebenza ngesikhathi sangempela.
Ukuhlonza noma iziphi izici zokusebenza ezingadinga ukunakwa noma ukwenziwa ngcono ngejubane elikhulu, ubulula nokunemba kuhlale kukukhathazeka okufanele kubaluleke kakhulu. Amabhizinisi angahle ahlupheke ngezinkinga ezingaba khona kanye nokukhathazeka okuye akwazi ukuphunyuka ekuqaphelisweni kaningi athola ukuthi ukwenza ngcono ukusebenza noma ukwenza kahle ukusebenza kahle kungaba yimpi yokukhuphuka.
Kusetshenziswa Izinsizakusebenza ezihamba phambili
Kusukela ekusetshenzisweni kwesoftware kuya kubahlinzeki benkampani evela eceleni, ukufuna amathuluzi wakamuva nokukhethwa okuhle kakhulu kwemithombo kwenza kube lula ukujabulela uhla oluphelele lwezinzuzo ezenziwe zaba khona izibalo nesikhathi sangempela sezibalo. Ukuwa kwamanani entengo ahlobene namasu wokuhlaziya idatha kusho ukuthi amabhizinisi amancane nezinhlangano ezinemali elinganiselwe kuphela zingakwazi ukuthola nokuthola izinsiza abazidingayo.
Noma ngabe ifuna izinsizakalo nosizo umhlinzeki wokuhlaziya ochwepheshe noma inkampani ekwazi ukukunikeza noma ukusebenzisa izinhlelo zedijithali ukukhanyisa izici ezahlukahlukene zezinketho zabo, amabhizinisi enza kahle ngokufuna izinsizakusebenza nezixazululo ezingcono kakhulu.
Amathrendi Esikhathi Esizayo Kwedatha Enkulu
Lapho nanoma iyiphi inombolo ye- zamanje nezesikhathi esizayo izitayela amabhizinisi abengaba nokuhlakanipha ukuzibheka. Idatha enkulu ishesha ukuba ngumthombo obalulekile, amabhizinisi ambalwa angakwazi ukungabi nayo. Izitayela zamanje zomkhakha, njengokuzenzakalela kwendawo yokusebenza okunganikeza ngemininingwane emikhulu yemininingwane nolwazi lokuhlaziywa noma izinsiza zesoftware ezenza kube lula ukukhiqiza imibiko noma ukuhlola amarekhodi adlule, kusho ukuthi amabhizinisi anamuhla angalindela ukubona okuningi kakhulu kokuhlaziywa kwedatha ku izinsuku ezizayo. Ukuhambisana nobuchwepheshe obuvelayo nokwenza umzamo wokufunda kabanzi nganoma yimaphi amathuluzi nezinsizakusebenza ezingatholakala maduze kunganikeza amabhizinisi inzuzo yangempela emizamweni yawo yokuthuthukisa ukusebenza.
Tags: Ama-Analyticsukuthuthuka okuqhubekayoubuhlobo bamakhasimendeukusebenza okuphezuluizibalo zesikhathi sangempelaizibalo
UChris Parsons uphothule iziqu ze-UCLA ngeziqu zeBusiness Management. Uyazifela ngebhizinisi futhi ubesebenza njengomxhumanisi webhizinisi kule minyaka eyishumi edlule. Ngesikhathi sakhe samahhala, ucwaninga izitayela zebhizinisi ezintsha futhi ahlanganyele ukusetshenziswa okufanele ngokubhuloga nokubonisana.
Ukubaluleka Kokuvumela Ukuthengisa